Korea Avaratra: anatin’ny ady psikolojika koa ny hatsaràn-tarehy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2010 7:34 GMT
Sarin'ny mpandroso sakafo Koreana Tavaratra (havia) sy ny mpilalao sarimihetsika Koreana Tatsimo Kim Tae-hee (havanana)
Ireo mpitoraka blaogy politika mavitrika kosa dia manoro hevitra ny vahoaka handalina kokoa noho izay hitan'ny maso. Ny mpitoraka blaogy NKinside dia naneho hevitra tao amin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe ‘Miasa ho an'iza i Kim Tae-hee an'ny Korea Avaratra?’ fa ireny vehivavy tsara tarehy ireny dia mpiasa ho an'ny tsombon-tsoan'ilay mpanao didy jadona Koreana Tavaratra, Kim Jung Il.
Esoeso avy hatrany no navalin'ireo Koreana Tatsimo ilay horonantsary. Ny mpitoraka blaogy Minazz99 dia nanamarika sary ihomehezan'ny ankamaroan'ireo mpampiasa aterineto hafa, ilay tovovavy Endrika mampiasa solosaina finday amerikana HP vaovao sy ny Hangul, rindram-baiko fanoratana vita Koreana Tatsimo, vokatra avy amina firenena roa lazain'ny fitondràna Koreana Tavaratra ho ilay fahavalom-panjakàna sy ilay governemanta mpamadika.
Manampy fanazavàna lalina amin'ity tranga ity koa ny mpitsoa-ponenana Koreana Tavaratra iray monina any Séoul. Nanoratra i Jang Jin-sung tao amin'ny blaoginy fa nanomboka tamin'ny nifehezan'ny Korea Avaratra ny fiakanjo sy taovolon'ny tsirairay, ireo “mpitsikilom-panjakana” tsy maintsy miditra any amin'ny fiaraha-monina Koreana Tatsimo ihany no mahazo manao ny fiakanjon'i Korea Atsimo. I Jang dia niasa ho mpitantsoratra tamin'ny Antokon'ny mpiasa mitondra an'i Korea Avaratra nialoha ny nifindrany tany Korea Atsimo tamin'ny 2004. Namotopototra ity hetsika Koreana Tavaratra ity ho tetika hanatsaràna ny endriny taorian'ny tranga tany Cheonana izay namoizana aina tantsambo Koreana Tatsimo 46 i Jang.